सातै जुनी सँगै बिताउने भनेर भर्खरै बिहे गरका पन्तले कोरोनाबाट संक्रमितबाट ज्यान गुमाएपछि… – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सातै जुनी सँगै बिताउने भनेर भर्खरै बिहे गरका पन्तले कोरोनाबाट संक्रमितबाट ज्यान गुमाएपछि…
एजेन्सी । कोभिड- १९ को संक्रमणबाट इलेक्ट्रीकल इन्जिनियर सन्जिब पन्तको निधन भएको छ । २८ वर्षिय पन्तको शनिवार चितवनमा अल्पायुमै निधन भएको हो। कोभिड-१९ संक्रमित पन्त अस्पताल भर्ना भएको तीन दिन भएको थियो । अध्यापन पेशामा कार्यरत पन्तले पश्चिमाञ्चाल क्याम्पस पोखराबाट डिप्लोमा र नेश्नल कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट इलेक्ट्रीकल विषयमा बीई अध्ययन गरेका थिए ।
बाग्लुङ्ग जिल्ला स्थायी घर भएका उनी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.८ स्थित श्री विश्वामित्र गणेश माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक धार (इन्जिनियरिङ्ग) तर्फ अध्यापनरत थिए । अध्यापनरत शिक्षक श्री सन्जिब पन्तको को’रोना सं’क्रमणको कारण २८ वर्षको कलिलो उमेरमा अकल्पनीय र असामायिक नि’धन भएको नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरले जनाएको छ।
प्रदेशगत रुपमा लुम्बिनीमा २३३ र कर्णालीमा २१६ प्रतिशतले संक्रमितको संख्या बढेको छ । ‘यसले विश्वमा एकदमै चाँडो संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको देशहरुमा नेपाल पनिपर्छ भन्ने देखाउँछ’ धुलिखेल अस्पतालको जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग निर्देशक डा. विराजमान कर्मचार्यले बताए । पोजेटिभिटी रेसियो अर्थात परीक्षण गरिएकाहरुको अनुपातमा संक्रमित ३७ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा ६७.९ र लुम्बिनीमा ६१.३ प्रतिशत छ ।
जबकी पोजेटिभिटी रेसियो ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । डा. कर्मचार्य भन्छन्, ‘अहिले संक्रमितको संख्या जति देखिएको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा संक्रमितहरु, जसको पीसीआर गरिएको छैन, समुदायमा छन् ।’ फैलिने दर पनि लुम्बिनी र कर्णालीमा नै धरै छ । लुम्बिनीमा २.९ र कर्णालीमा २.४ प्रतिशत छ । निषेधाज्ञाले अहिले भएको संक्रमणलाई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने जनस्वास्थ्य विदहरु बताउँछन् । यसले समुदायमा भएको संक्रमण कम गरेपनि घरभित्र फैलिन सम्भावना टार्दैन । त्यसैले कसैलाई लक्षण देखिएमा आइसोलेट हुने र परीक्षण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विभाग निर्देशक डा. कर्मचार्यले बताए ।
सपना मगरलाई एनआरएनएले गर्‍याे नगदसहित सम्मान